ओलीले तत्काल राजीनामा नदिने, संसदकाे सामना गर्ने : RajdhaniDaily.com - ओलीले तत्काल राजीनामा नदिने, संसदकाे सामना गर्ने
Home प्रदेश प्रदेश ३ ओलीले तत्काल राजीनामा नदिने, संसदकाे सामना गर्ने
काठमाडाैं । प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि संकटमा परेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल राजीनामा नदिने भएका छन् । प्रधानमन्त्रीका सन्चार सल्लाहकार सूर्य थापाले प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा नदिने बताएका छन् ।
मंगलबार साँझ सामाजिक सन्जालमार्फत सल्लाहकार थापाले सर्वोच्च अदालतको फैसला विवादास्पद रहेको तर स्वीकार गर्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाको सामना गरेर फैसला कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन् ।
उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला विवादास्पद छ, तर मान्नुपर्छ । र, कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसका दुस्प्रभावहरु भविश्यमा देखिँदै जानेछन् । यसबाट राजनीतिक समस्याहरुको कुनै हल हुने अवस्था पनि छैन । बरु अस्थिरता अझै बढ्ने छ । सत्ताको खेल बढ्नेछ । प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिभिसभाको सामना गरेर नै फैसला कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ । तत्काल राजीनामा दिनुहुने छैन ।’
ओलीले तत्काल राजीनामा नदिने
संसदकाे सामना गर्ने
काठमाडौँ । चर्चित साङ्तिक समुह मङ्गोलियन हार्टका लोकप्रिय गायक राजु लामाले राजधानीबासी नचाउने भएका छन् । नेपाली नयाँ बर्षको २०७८को अवसर पारेर बैशाख १...
काठमाडाैं । नेपालको राष्ट्रिय बसपार्कका रुपमा रहेको गोँगबुस्थित नयाँ बसपार्कका टिकट काउण्टर आगामी बुधबारदेखि बन्द हुने भएका छन् । बसपार्कका टिकट काउण्टरलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको टिकट काउण्टरमा...
आरक्षण होइन, सक्षमतामा खोजौं
अघिल्लो साता एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आरक्षणका नाममा योग्यता, सक्षमता र दक्षतालाई ओझेलमा पारिएकाले यसमा पुनर्विचार गर्न जरुरी भएको अभिव्यक्ति दिए ।...
रेसुङ्गामा डढेलाे लागेकाे साता बित्याे, अझै नियन्त्रणमा आएन
गुल्मी । गुल्मीको रेसुङ्गा क्षेत्रमा एक हप्तादेखि लागेको आगो नियन्त्रणमा आएको छैन । चैत्र २१ गते रेसुङ्गा नगरपालिका १४ को पराल्मी तथा २२ गते...
अफ्रिकन रुट्स फाइनलमा
पोखरा । पाहुना टोली अफ्रिकन रुट एसोसिएसन १९औं संस्करणको आहारारा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको फाइनल पुगेको छ । उपाधिका लागि उसले शनिबार संकटाको सामना...
सिरहाको मिर्चैयामा लकडाउन
लहान । सिरहाको मिर्चैया नगरपालिकामा कोरोना सङ्क्रमणको थप जोखिम हुन नदिन लकडाउन गरिएको छ । नगरपालिकाको वडा नम्बर ६ का ३ जनामा कोरोना सङ्क्रमण...
चिनियाँ कोरोना खोपलाई नेपालमा पनि आपतकालीन प्रयोगको अनुमति प्रदान
प्रमुख Roshan Shrestha - February 18, 2021 0
काठमाडौं । चीनमा निर्मित कोरोनाविरुद्ध खोपलाई पनि नेपालमा आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति प्रदान गरिएको छ । औषधि व्यवस्था विभागले बुधबार विज्ञप्ती जारी गरी चाइनिज...
तारे होटललाई क्वारेन्टाइन बनाउने तयारी
Editor-Picks Kumar Raut - April 15, 2020 0
काठमाडौं । सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमण वृद्धि हुँदै गएमा काठमाडौं उपत्यकाका तारे होटललाई क्वारेन्टाइन बनाउने तयारी गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा निर्माण भएका...
विदेश Roshan Shrestha - December 9, 2020 0
प्रदेश Dhruba Lamsal - October 5, 2020 0
सप्तरी, राजविराज । कोरोना महामारीको जोखिम कायमै रहेका बेला जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीमा सेवाग्राहीहरुको अत्याधिक चाप बढेको छ । दिनहुँ पाच÷६ सय भन्दा बढी सेवाग्राही...
भर्खरै Roshan Shrestha - July 3, 2020 0
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आफ्नै पार्टीबाट राजीनामाको दबाब आए पनि उनी प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पदबाट बाहिरिने सम्भावना छैन । उनले राजनीतिक...
प्रदेश ३ Sushila Bishwokarma - December 13, 2020 0
काठमाडौँ । कोभिड–१९ का कारण काममा पुगेको बाधाले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ‘हेडबक्स’ निर्माण तोकिएको अवधिमा सम्पन्न नहुने भएको छ । बन्दाबन्दीको समयमा निर्माण सामग्री...
Breaking News Sushila Bishwokarma - January 1, 2021 0
जनकपुरधाम । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजन भएसँगै प्रचण्ड–नेपाल समूहले प्रदेश २ का संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डललाई हटाउने तयारी थालेको छ । आज जनकपुरस्थित...
राजु सदाको लागि न्याय माग्दै जनकपुरमा प्रदर्शन, प्रहरीद्वारा हवाई फायर
प्रदेश २ Sushila Bishwokarma - July 2, 2020 0
जनकपुरधाम । प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधाममा उपचार अभावमा मृत्यु भएका धनुषाको हंसपुर नगरपालिकाका राजु सदाको लागि न्याय माग्दै जनकपुरमा भएको प्रदर्शनमा प्रहरीले हवाई फायर गरेको...
प्रदेश ६ Sushila Bishwokarma - June 18, 2020 0
रुकुमपश्चिम । रुकुम(पश्चिम)को चौरजहारी नगरपालिका–८ सोती घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परी मुद्दा लागेका सबै प्रतिवादीको बयान सकिएको छ । मुद्दा दर्ता भएको चार...
मानिसबाट जनावरमा सर्यो कोरोना, चिडियाखानाको ४ बर्षे बाघमा भेटियो संक्रमण
Breaking News Roshan Shrestha - April 6, 2020 0
काठमाडौं विश्वभर फैलिएको कोभिड १९ (कोरोना भाईरस) मानिसमा मात्र नभई जनवारमा समेत देखा पर्न थालेको छ । विश्वमा नै पहिलो पटक...
आयोजकले चुम्यो उपाधि
राजधानी संवाददाता - April 8, 2021
रबिन कटेल - April 14, 2021
डा. प्रकाश बुढाथोकी - April 10, 2021
रासस - April 8, 2021